मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक खुल्यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक खुल्यो
चैत्र १, २०७५ बलराम घिमिरे
(रसुवा) — ९ महिनादेखि बन्द मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । पहिरो पन्छाउने काम सकिएपछि यो सडक सञ्चालनमा आएको हो । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाका प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले सडकमा अब साना गाडी चलाउन सकिने बताए । ‘केही ठाउँमा मोड फराकिलो बनाउने काम बाँकी छ, ठूला गाडी चल्न केही दिन लाग्छ,’ उनले भने ।
नेपाली सेनाले निर्माण गरेको उक्त खण्डको लम्बाइ करिब १७ किमि छ । पहिरो पन्छाउन नसक्दा उक्त खण्डमा गत बर्खादेखि नै आउजाउ बन्द भएको थियो । सडक आयोजनाले गत पुस अन्तिम साताबाट अवरोध पन्छाउन थालेको थियो । चट्टान फुटाउन समयमै विस्फोटको अनुमति नपाउँदा सडक सञ्चालन गर्न केही महिना ढिला भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भएकाले चीनबाट हुने धेरैजसो आयात–निर्यात २०७२ मंसिरदेखि रसुवागढी नाकाबाट हुँदै आएको छ । राजधानीबाट रसुवागढी नाका पुग्न छोटो दूरीको सडक बनाउने सरकारको योजनाअनुसार यो सडकको निर्माण सुरु गरिएको हो । पछिल्लो समय नाकाको भौतिक संरचनाको विकासमा चीनले चासो दिएपछि गल्छी–रसुवागढी सडक खण्डलाई तीन भागमा विभाजन गरेर निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ ।
पहिलो खण्ड गल्छी–मैलुङ ४६ किमि सडक निर्माण भइरहेको छ । आयोजना प्रमुख देवकोटाका अनुसार उक्त सडक खण्डको ३९ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ । मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक दोस्रो खण्ड हो । मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गर्ने काम पनि सकिएको छ । पहिरोले सडकमा थप क्षति गरेपछि गत असारमा तयार पारिएको डीपीआर संशोधन गरिएको हो । ‘सडकको लागत इस्टिमेट तयार गर्ने काम भइरहेको छ,’ देवकोटाले भने, ‘अब अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर सडक स्तरोन्नति गर्न अर्को सातादेखि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’
सडकको अन्तिम खण्ड १६ किमिको स्याफ्रु–रसुवागढी खण्ड चीनले बनाउने सहमति छ । त्यसअनुसार आगामी जुलाईबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य छ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक अबको २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । रसुवागढीदेखि गल्छीसम्मको दूरी करिब ८२ किमि छ । गल्छी–काठमाडौंको दूरी ४७ किमि छ । बेत्रावती–कालिकास्थान–धुन्चे हुँदै स्याफ्रु पुग्न ५४ किमि पार गर्नुपर्छ । बेत्रावती मैलुङ–स्याफ्रुबेंसीको दूरी २९ किमि छ ।
यो सडक बेत्रावती–कालिकास्थान–धुन्चे हुँदै स्याफ्रु जोड्ने सडकभन्दा २५ किमि छोटो हुनेछ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक बनेपछि उत्तर (चीनको केरुङ) र दक्षिण (भारतको ठोरी) जोडिने सबैभन्दा छोटो त्रिदेशीय सडक हुने आयोजना प्रमुख देवकोटाले बताए । पर्साको ठोरीबाट चितवनको भण्डारा–गल्छी हुँदै त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक सञ्चालन हुँदा चीन र भारतबीचको दूरी करिब २ सय ३० किमि हुन आउँछ । नेपालको रसुवागढी–केरुङ दूरी २४ किमि छ ।
प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०९:४४
मनाङमा एमबीबीएस डाक्टर
चैत्र १, २०७५ आश गुरुङ
(लमजुङ) — तीन दशकअघि बिदेसिएका एक मनाङीले जन्मथलो सम्झँदै गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा एमबीबीएस डाक्टर सहितको मेडिकल टोली राख्ने भएका छन् । स्वास्थ्य सहायकको भरमा रहेको नासों गाउँपालिका ५, थोंचे स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष जनशक्ति राख्न मनाङबाट बिदेसिएका डा. देवी गुरुङले पहल गरेका हुन् ।
मनाङको नासोंमा डा. देवी गुरुङ (बीच) लगायतलाई स्वागत गर्दै स्थानीय । डा. गुरुङले नेतृत्व गरेको संस्थाले नासोंमा चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गर्ने भएको छ । तस्बिर : कान्तिपुर
चौकीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा गुरुङले नेतृत्व गरेको हिमालयन फेमिली हेल्थकेयरले चिकित्सकसहितको जनशक्ति उपलब्ध गराउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । मनाङको तल्लो भेग तिल्चेमा जन्मिएका देवी करिब ३३ वर्षअघि संघर्ष गर्दै अमेरिका पुगेका थिए । त्यहाँ पीएचडीसम्मको अध्ययन पूरा गरी जन्मथलोकै स्वास्थ्य अवस्था सुधार्न केही वर्ष अघिदेखि उनी नेपाल आउँदै फर्कंदै गर्न थालेका हुन् ।
सम्झौताअनुसार हिमालयन फेमिलीले उक्त चौकीमा एक एमबीबीएस डाक्टर, वरिष्ठ नर्स, स्वास्थ्य सहायक र औषधिसमेत उपलब्ध गराउनेछ । २ महिना हिउँ पर्ने उक्त क्षेत्रमा बाँकी १० महिनाका लागि ती सेवा उपलब्ध गराउन ३३ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । उक्त रकम देवीको अगुवाइमा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । ‘यो असाध्यै ठूलो सहयोग हो । दुर्गमका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा समस्या पर्दा निकै राहत हुनेछ,’ स्थानीय अगुवा धोर्जे डन्डुल गुरुङले भने । जन्मथलो फर्किएर देवीले जिल्लावासीलाई ठूलो गुन लगाएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘पहिले धेरै दु:ख पाएका देवीले आफू सक्षम भएपछि गाउँको स्वास्थ्य सुधार्ने लक्ष्यसाथ काम थालेका छन् । हामी सदैव साथ दिनेछौं ।’ ऊक्त क्षेत्रमा दक्ष चिकित्सकसहितको चौकी हुँदा चत्रीय अन्नपूर्ण र मनास्लु पदयात्रीलाई समेत सहज हुनेछ । यो क्षेत्रमा वार्षिक करिब ३० हजार पर्यटक घुम्न आउने तथ्यांकमा छ । उनीहरू दुर्घटनामा पर्दा वा आकस्मिक रूपमा बिरामी पर्दा हेलिकप्टरबाट लानुको विकल्प थिएन । ‘गाउँमै डाक्टर हुँदा यो समस्या टर्नेछ,’ स्थानीय सोमी गुरुङले खुसी हुँदै भनिन् ।
कार्यक्रममा डा. देवीले टुहुरो हुँदा आफू र परिवारले ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको, काठमाडौंमा भाँडा माझेर बसेको र त्यही क्रममा एक ‘गडफादर’ मार्फत अमेरिका पुगेको प्रसंग सुनाएका थिए । गाउँमै अस्पताल बनाउने अभियान सुरु गरेको र त्यसका लागि ७ रोपनी जग्गासमेत यसअघि किनिसकेको उनले जनाए । उनकी पत्नी कोनीले आफ्नो माइती कोरिया र कर्मथलो अमेरिका भए पनि पतिको जन्मथलोमा आएर सेवा गर्न पाउँदा बेग्लै खुसी लागेको सुनाइन् । डा. देवीले चौकीलाई सुविधासम्पन्न बनाउने र पछि अस्पताल बनाउने सोच बनाएका छन् । नासों गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घलेले गाउँपालिकाले अस्पताल बनाउने सोच बनाएको र डा. देवीले पनि बनाउने कुरा सुनेको बताए । ‘डा. देवी मेरो साथी हुनुहुन्छ । उहाँले अस्पताल बनाउने सोच र हाम्रो पनि अस्पताल बनाउने सोच । यसमा कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी सकारात्मक छौं ।’ देवी दम्पतीले थोंचे र तिल्चेका २ विद्यालयलाई १/१ ल्यापटपसमेत वितरण गरेका छन् ।
प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०९:३५